Al-Shabaab oo galabta meel fagaaro ah ku toogtay Nin dhallinyaro ah, kaddib markii lagu… | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Al-Shabaab oo galabta meel fagaaro ah ku toogtay Nin dhallinyaro ah, kaddib...
Al-Shabaab oo galabta meel fagaaro ah ku toogtay Nin dhallinyaro ah, kaddib markii lagu…
Qoryooley (Halqaran.com) – Al Shabaab ayaa Sabtidii galabta xukun dil ah ku fuliyay nin dhalinyaro ahaa, ka dib markii ay ku eedeeyeen in uu u galmooday nin kale amaba uu ku kacay ficil Qowmu Luud ah.
Ninkan oo lagu magacaabi jiray Axmed Qaadi Maadey (Axmadey) ayaa waxaa lagu toogtay fagaare ku yaala Deegaanka Doon Buraale ee duleedka Degmada Qoryooley ee Gobolka Shabellaha Hoose.
Qaadiga Maxkamadda Ururka Al-Shabaab ee Gobolka Shabellaha Hoose ayaa fagaaraha ka akhriyay xukunka Maxkamadda, isla-markaana ay maxkamadda ku heshay eedeymihii ninkaasi loo soo jeediyay.
Qaadiga ayaa sheegay in Axmadey uu qirtay in uu ku kacay ficil Qowmu Luud ah, sidaasi daraadeedna ay Maxkamadda Shabaabka ku xukuntay in la dilo.
Gudoomiyaha ayaa intaasi ka dib ku dhawaaqay in xukunka la fuliyo, iyadoona ay fuliyeen Ciidamada Xisbada Shabaabka, ee sida booliska u tababaran.
Ururka Al-Shabaab ayaa deegaanada ay ka arrimiso waxay ka fulisaa xukuno kala duwan oo maxkamadaheyda ay dadka ku ridaan, waxayna xukunadaasi fuliyaan, iyagoo oranaaya (Isagaa qirtay/Iyadaa qiratay), mana soo bandhigaan cadeymo intaasi dhaafsiisan.
Al Shabaab oo meel fagaaro ah ku toogtay nin dhallinyaro ah